Uvavanyo lwenokia 8 | Iindaba zeGajethi
Uvavanyo lwenokia 8
Kwiintsuku ezimbalwa, sele singabamba iNokia 8, iflegi yenkampani yaseFinland, eyenziwe yiHMD Global. Esi siginali sitsha sinika umdla wexabiso lomgangatho onomdla kakhulu, yiyo enye yeendlela ezilungileyo esinokuthi sizifumane kwimarike ukuba sifuna ukufumana i-terminal elawulwa yi-Snapdragon 835 ehamba ne-4 GB ye-RAM. IJerryRigEverything ubeke i-terminal entsha yeNokia kuvavanyo loxinzelelo ngokuchasene nemikrwelo sisebenzisa izixhobo ezahlukeneyo ukongeza kuvavanyo olunyanzelekileyo phantse ukuba sizama ukulugoba.
Ukuthathela ingqalelo into yokuba umzimba wale ndawo yesiphelo wenziwe ngealuminium kwaye ikumgangatho ophantsi kwizinto esizibonayo kwividiyo, iNokia 8 ayihambelani nezixhobo ezibukhali, ezinje ngesikroli, esinokukrazula ngazo iziqwenga Ityala. Izitshixo azihambelani kakuhle nealuminium esetyenzisiweyo, ke kuya kufuneka siyithathele ingqalelo le nto xa sisabelana nayo epokothweni. Ukuba, xa uzama ukuyisonga, INokia 8 iyaxhathisa njengezona zininzi.
Kodwa ayisiyiyo i-aluminium esetyenzisiweyo kuphela esemgangathweni osezantsi, kwinto ekufuneka siyifumene ukuze ixabiso lihlengahlengiswe, kodwa iglasi ekhuselweyo yiGorilla Glass 5 kananjalo ayisiniki nkxalabo inkulu kumaqhuma okanye ukukrwela okungenanjongo, nangona kolu vavanyo onke engamatsha-ntliziyo. Emva kokubona ezi mvavanyo, kufuneka siqwalasele ukusetyenziswa kwekhava ukuba okanye ukuba ingemva kwesixhobo, kungenjalo sifuna ukuba siqale ukubonisa ukukrwela okokuqala emva kotshintsho.
Ukushiya ecaleni kovavanyo loxinzelelo, olugqithisa ngokufanelekileyo, into Isigqibo xa kuthengwa le terminal Siyifumana kuba iya kuba yenye yeetheminali zokuqala ukufumana iinguqulelo ezintsha ze-Android, enkosi kwisivumelwano ekufikelelwe kuso noGoogle ukuba silawulwe phantse ngenguqulelo efanayo neGoogle Pixel
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Uvavanyo lwenokia 8
Iinyembezi zethu zinokwanela ukuvelisa umbane